तरकारी खेतीतर्फ युवाको बढ्दो आकर्षण «
तरकारी खेतीतर्फ युवाको बढ्दो आकर्षण
प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७७, मंगलवार १४:१९
राम्रो रोजगारी र आकर्षक कमाइका लागि विदेश जाने होड चलिरहेका बेला तुलसीपुरका युवा भने व्यवसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।
गतवर्ष लगाएको तरकारी सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण विक्री गर्न नपाएपछि झन्डै रु ५० लाख घाटा ब्यहोर्नु परेको फार्म सञ्चालक समितिका संयोजक घनश्याम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले थोरै भएपनि सहज परिस्थिति निर्माण भएकाले पुनः तरकारी लगाउन शुरु गरेका छौं तर त्यो पनि विक्री गर्न पाइन्छ कि पाइदैन् भन्ने चिन्ता लागेको छ ।” पहिलो वर्ष उत्पादन राम्रो भएकाले बन्दाबन्दीका कारण विक्री गर्न नपाउँदा घाटा भएपनि आफूहरु नआत्तिएको उहाँले बताउनुभयो । पोखरा, बुटवल, नारायणगढको बजारलाई हेरेर तरकारी उत्पादनमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।
धेरै जमिनमा तरकारी खेती शुरु गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको तरकारी पकेट जोनमा ५० प्रतिशत अनुदानअन्तर्गत हाम्रो फार्मले रु. १४ लाख पाएको बताउँदै संयोजक सापकोटाले भन्नुभयो, “केराखेती विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि ज्ञानकेन्द्र दाङले रु. ३ लाख उपलब्ध गराएको छ ।” ग्रीनकोर ग्रुप प्रालिमा अहिलेसम्म रु एक करोड लगानी लागेको उहाँको भनाइ छ ।
उक्त फार्ममा कृषि सम्बन्धि तालीम लिएका छ जनालाई रोजगारी दिइएको छ । दैनिक ज्यालादारी र मजदूर गरी करिब ७० जना स्थानीयवासीलाई सो फार्मले रोजगारी दिइएको बताइएको छ । रासस
काटेर सुकाउन राखेको धान खेतमै उम्रियो ः लागत खर्च नउठ्दा…
कञ्चनपुर, ५ कात्तिक (रासस) ः लगातार चार दिनको वर्षापछि घाम
आइतबार रातिदेखिको लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण खानेपानीको मुहान पहिरोले
बाढी, पहिराबाट मृत्यु भएकाको शव परीक्षण नगरी दाहसंस्कार गरिने
पाँचथरमा बाढी तथा पहिरामा परी मृत्यु भएकाको शव परीक्षण नगरी
बागलुङ जिल्लाभर लगातार ४ दिनको वर्षातले १०० रोपनी भन्दा बढी